Apple Watch Series 7: hombe, yakasimba, yakawanda zvakafanana | IPhone nhau
Luis Padilla | 18/10/2021 11:53 | Yakagadziridzwa ku 18/10/2021 11:55 | Apple Watch, dzakawanda
Isu takaedza iyo Apple Watch Series 7, chaizvo iyo simbi modhi mu graphite ruvara neLTE yekubatanidza. Screen hombe uye nekukasira kurodha ... zvine here shanduko? Zvinoenderana nezvaunazvo paruoko rwako.
Runyerekupe nezve Apple Watch yenguva yemberi inotanga kubva panguva iyo modhi nyowani inotangwa, uye kwegore pane nguva yemafungidziro mazhinji anozopedzisira ave kusagadzikana. Gore rino isu taitarisira shanduko mukugadzirwa, kusanganisira sensors nyowani kuyera tembiricha uye neropa glucose mazinga, kunyangwe kuwedzerwa kweropa kwaizodzorwa neApple Watch. Asi chokwadi ndechekuti Apple Watch yasvika padanho repamusoro rekukura zvekuti shanduko dzirikutouya nedropper, uye gore rino rinosimbisa.
1 Masikisi matsva, akafanana dhizaini
2 Zvimwe zvinopesana
3 Kurumidza kubhadharisa
4 Mavara matsva asi asipo mavara
5 Zvimwe zvese hazvichinje
6 Chidzitiro chinoruramisa zvese
Masikisi matsva, akafanana dhizaini
Huru hutsva hweiyo nyowani Apple Watch hukuru hwayo hukuru mumhando mbiri idzi. Nekuwedzera kushoma muhukuru hwese, Apple yakwanisa kuwedzera saizi yezviratidziro pane ese maviri mamodheru, ichideredza mabhezeri kusvika padanho iro ratidziro dzinowedzera kusvika kumucheto wakakombama wegirazi, iyo inonyanya kuoneka kana isu tichiona yakazara skrini mifananidzo kana kushandisa avo nyowani matunhu, yakasarudzika kuChikamu 7. Iyo skrini inosvika kusvika ku20% yakakura kupfuura muChikamu 6, uye kunyangwe pakutanga zvaitaridza kuti shanduko yaizove isingakoshe, muhupenyu chaihwo zvinoita sekunge yakatonyanya.
Shandisa maapplication akaita Calculator, iyo Contour uye Modular Duo dials (yakasarudzika), kana kunyangwe iyo nyowani yakazara keyboard (zvakare yakasarudzika) inosimbisa iyi hombe saizi saizi. Inotaridza zvakawanda ... kunyangwe pasina chikonzero chekuti sei vasiri kuwanikwa mumhando dzakapfuura, nekuti kana Series 7 ye41mm ichigona kuva navo, Series 6 ye44mm inogona zvakare. Zvinonyadzisa aya marudzi esarudzo, nekuti ane gore-gore Apple Watch (Series 6) iri kutobuda kunze kweimwe software nyowani, uye izvo hazviitire mudziyo chinhu chero chakanaka.
Pamusoro pekudzora saizi, iyo skrini inopenya (inosvika 70%) kana isingashandi, sekureba sekunge iwe uine "Screen inogara iri" sarudzo yakamisikidzwa. Kana usati wamboyedza iyi sarudzo yeApple Watch, zvirokwazvo haugone kuikoshesa, asi kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiona kuti inoshanda zvakanyanya Nekuti inokutendera kuti utarise iyo nguva iwe uchinyora chinyorwa chakadai, pasina kusimudza ruoko rwako kubva kubhodhi uye kubaya ruoko rwako. Iyi shanduko mukupenya inovandudza mashandiro aya uye inoita saizvozvo (mune dzidziso) isina kukanganisa kuzvimiririra kwewachi, yakanakisa.
Tinoenderera mberi tichitaura nezvewachi skrini, chimwe chezvikamu zvaro zvakapusa. Apple inova nechokwadi icho girazi repamberi reApple Watch rinonyanya kudzivisa kutyisidzira, nekuda kwedhairekitori nyowani ine hwaro hwakadzika, pamusoro pekusimbisa wachi se IP6X inopokana neguruva, iyo inoipa chengetedzo yakazara. Apple haina kumbobvira yasimbisa wachi yayo nekupokana neguruva, saka hatizive mutsauko uchienzaniswa nezvizvarwa zvakapfuura. Nezve kuramba kwemvura, isu tichine hudzamu hwemamita makumi mashanu, pakange pasina shanduko mune izvi.
Apple Watch ichine akasiyana epamberi windows zvichienderana nekuti iwo Sport mutambo kana yesimbi modhi. Kana iri Sport modhi, iine IonX girazi rinonyatsopokana nekuvhunduka, risinganyorwe nekukwaya, nepo iyo simbi yemhando iyo kristaro inogadzirwa neSafiri, inopokana zvisingaite nekukwaya, asi isinganyararike nekuvhunduka. Mune ruzivo rwangu, ndiri kunyanya kunetsekana nekukwaya pagirazi kupfuura mapundu, uye ndizvo chaizvo zvezvikonzero nei ndakasarudzira simbi yemhando zvakare mushure megore neAluminium Series 6.
Kukurumidza kuchaja chave chimwe chezvinhu izvo kuvandudzwa kweiyi nyowani yeApple Watch Series 7. Tingadai takafarira zvimwe kuwedzera kuzvitonga kusvika tasvika mazuva maviri tisina kuimisazve, asi isu tinofanirwa kuzvigadzirisa. zvinotora nguva shoma kuti iite recharge. Chimwe chinhu chiri nani kupfuura chero chinhu. Izvi zvichaita kuti zvive nyore kukwanisa kuzvipfeka panguva yehusiku kuongorora kurara kwedu uye mangwanani zvinoshanda seyadhi yekurira.. Sekureva kwaApple, tinogona recharge yedu Series 7 kusvika pa30% nekukurumidza kupfuura iyo Series 6, kubva zero kusvika 80% mumaminetsi makumi mana, nemaminetsi masere ekuchaja (tichikwesha mazino edu) kupa kwehusiku hwese hwekutarisa kurara.
Sezvo Apple yakatanga ichi chitsva chekurara paApple Watch yedu, ndanga ndajaira kuichaya kaviri pazuva: pandinosvika kumba husiku ndichigadzirira kudya kwemanheru uye kusvikira ndarara, uye mangwanani pandinogeza. Nemutengo mutsva uyu wekukurumidza ndichakwanisa kuisa wachi pawrist yangu pakutanga usiku, ndisina kumirira kuenda kunorara ... sekureba kwandinoyeuka, izvo zvichaitika zvakanyanya kushoma. Pamwe nekufamba kwenguva uku kumhanyisa kuchaidza kuchabatsira chaizvo, asi parizvino handifunge kuti chichava shanduko huru mutsika dzevazhinji.
Kuti ugone kushandisa nekuchaja nekukurumidza, zvinodikanwa kuti ushandise new charger tambo ine USB-C chinongedzo iyo inowanikwa mubhokisi reApple Watch, uye charger iyo inofanirwa kuve nemagetsi ekuchaja e18W kana kuenderana nePower Delivery mune iyo kesi 5W ingave yakakwana. Iyo yakajairwa 20W Apple charger yakakwana kune izvi, kana chero imwe charger kubva kune yakavimbika inogadzira iyo yatinogona kuwana paAmazon nemutengo wakaderera (sezvizvi). Nenzira, Apple MagSafe base inodhura € 149 haienderane nekuchaja nekukurumidza, yakanyanya tsananguro.
Mavara matsva asi asipo mavara
Gore rino Apple yakafunga kushandura iyo gamut gamut yeayo Apple Watch munzira hombe, uye zvadaro nechisarudzo chisina kufarirwa nemunhu wese. Mune kesi yealuminium Apple Watch Sport, Hatisisina sirivheri kana grey nzvimbo, nekuti Apple yawedzera nyeredzi chena (inova chena-goridhe) uye pakati pehusiku (bhuruu-nhema) kuzvitsiva. Iyo inochengeta iyo tsvuku nebhuruu, uye zvakare inowedzera yakasviba yakasvibirira yemauto maitiro ayo ari kufarirwa zvakanyanya. Dai ndanga ndasarudza aluminium gore rino ndinofunga ndingadai ndakagara pakati pehusiku, asi hapana kana rimwe remavara rinonyatsogutsa kwandiri.
Zvichida izvo zvakandiita kuti ndiende kune iyo simbi modhi, iyo yanga ichitemesa musoro wangu kubvira ndisati ndaziva mavara ekupedzisira. Mune simbi inowanikwa mune sirivheri, goridhe uye graphite (nekuti dema dema rakaganhurirwa kuHermes edition isingasvikike kune vazhinji). Simbi inogara ichigadzira kufungidzira kuzhinji kune avo vanofunga nezvayo nekuda kwekuti ingamirisane sei nekufamba kwenguva, asi inosimudza zvirinani kupfuura aluminium. Uye ndinotaura izvi mushure mekunge mave nemaApple maviri esimbi uye maviri mualuminium.
Chekupedzisira, isu tine sarudzo yeApple Watch mune titanium, ine nzvimbo nhema uye titanium vara isingandibvumidze, ndosaka ndakasarudza simbi, iyo inodhurawo.
Zvimwe zvese hazvichinje
Hakuchina shanduko kune iyo nyowani Apple Watch. Yakakura saizi saizi ine inopenya isina basa, kumirisana negirazi repamberi uye nekukurumidza kuchaja kwandisingaone kushandiswa kwakawanda panguva ino. Hatina kana kumbotaura nezvesimba rakakura kana kumhanyisa kana uchiita mabasa, nekuti hapana. Iyo processor inosanganisa ino nyowani Series 7 inenge yakafanana neiyo Series 6, iyo kune rimwe divi inoshanda chaizvo kunyangwe neazvino mashandiro esisitimu, watchOS 8, asi zvakafanana. Vamwe vedu vaitarisira nhanho diki inoenda kurusununguko kubva kune iyo iPhone, asi kana.
Iko hakuna zvakare shanduko yesensa, hapana hutano maficha, hapana yekurara yekutarisa, uye hapana chaiwo matsva maficha, sezvo pasina. Kana isu tikaisa padivi dials nyowani, hapana yakasarudzika ficha yeiyo Series 7, asi kwete nekuti ivo vakaverengerwa mune mamwe, asi nekuti hapana chaicho chitsva. Iyo Apple Watch chigadzirwa chakakomberedza, zvese nekugadzirwa uye nehutano uye nemitambo yekutarisa mabasa. Kuyera kwepamoyo, kuyerwa zvisina kukwana mutero, kuyerwa kweoksijeni, uye EKG inotora bhawa, kukwirira zvekuti kunyangwe Apple haina kukwanisa kuirova gore rino, kugara kwayaive. Unogona kuitenga kubva ku € 429 (aluminium) kuApple neAmazon (link)
Chidzitiro chinoruramisa zvese
Apple yatanga smartwatch nyowani mavakabheja zvese pane inoyevedza, yakanaka uye inopenya skrini. Iyo inoshamisa zvechokwadi kana uchinge waiburitsa mubhokisi wobva wabatidza wachi kekutanga. Iko shanduko muhukuru uye kuwedzera kwenzvimbo yescreen kusvika kumucheto chaiko kunoita kuti iratidzike senge wachi yakakura kwazvo kupfuura yaakatangira, kunyangwe yainge yawedzera zvishoma saizi. Asi ndizvozvo, hapana chitsva chingataurwa pamusoro peiyi Nhepfenyuro 7, chero chinhu chitsva chiri chaicho chakakodzera.
Iyo Apple Watch ndiyo yakanakisa smartwatch pamusika, kure neyechipiri, uye kunyangwe kuzorora kwegore rino hakuzoite kuti daro iri ripfupike. Sarudzo yekutenga Apple Watch Series 7 inofanirwa kutorwa nekutarisa zvauri kupfeka izvozvi paruoko rwako. Ichave yako yekutanga Apple Watch? Saka iwe tora yakanakisa smartwatch yaunogona kutenga izvozvi. Unotova neApple Watch here? Kana iwe wanga wafunga kuzvichinja, enda kumberi. Asi Kana iwe ukave nekusahadzika, iyi nyowani Series 7 haisi kuzokupa iwe zvakawandisa zvikonzero zvekuzvibvisa mukuda kwayo.
Yakatumirwa pa: 18 2021 October
Kugadziridza kwekupedzisira: 18 2021 October
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple Watch Series 7: hombe, yakasimba, yakawanda yakafanana
Maminitsi masere ekugeza mazino…. Ndiri kuita chimwe chinhu chisina kunaka X)